विशेष Archives - सप्तरंगी मिडिया
४ भदौ, काठमाडौं । सप्तकोशी नदीमा हाम फाली आत्महत्याको प्रयास गर्ने ६ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले सकुशल उद्धार गरेको छ । ब्यारेजको पुलबाट नदीमा हाम फालेका उनीहरु सबैलाई प्रहरी चौकी कोशी ब्यारेजका प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । गत असारदेखि साउन महिनाको अवधिमा आत्महत्याका लागि नदीमा हाम […]
भाद्र ४ , काठमाडौँ । मेष – प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। सम्भावना देखिए पनि चिताएको उपलब्धि प्राप्त नहुन सक्छ। सामान्य कामका लागि पनि दौडधुप गर्नुपर्ला। तापनि समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ हुनेछ। नचिताएको क्षेत्रबाट फाइदा हुनेछ। वृष – मनोरञ्जनमा […]
४ भदौ, काठमाडौं । मलेसियामा विदेशी श्रमिक माथिको धरपकडलाई तीब्र पारिएको छ । पछिल्लो समय मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई लक्षित गर्दै धमाधम धरपकड अभियान जारी राखेपछि दैनिक नेपालीसहित आप्रवासी कामदार पक्राउ परिरहेको छन् । मलेसियाले बुधबार मात्र सुरक्षा गार्डसहित थप २२ जना विदेशी श्रमिकलाई पक्राउ गरेको मलेसियाली अध्यागमन विभागले जनाएको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार ३६ […]
साउन २५ , काठमाडौँ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स (GLICL) ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.५० प्रतिशत बोनस शेयर तथा सोको कर प्रयोजनार्थ ०.२८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। साउन २४ गते सम्पन्न इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा […]
१९ साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सोमबार गरेको तीनजना स्वास्थ्य पदाधिकारीहरूको सरुवा तत्काल रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन् । सोमबार वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतम, डा. विवेकलाल कर्णलगायत तीनजना सहसचिवको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ११ औँ […]
१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन् । नेपालका लागि खेल्नु नै आफ्नो जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हो भन्दै उनले क्रिकेट यात्रामा साथ, समर्थन, माया र हौसला दिने सबैप्रति ऋणी रहने जनाएका छन् । क्रिकेटर खड्काले मैदानभित्रका दुई दशक जीवन रहुन्जेल मिठो यादका रुपमा आफूसँग रहने […]
रोकिएन सिन्धुपाल्चोकमा बाढी , मेलम्चीमा गएराति पनि ठूलो बाढी
१८ साउन, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा गएराति पनि ठूलो बाढी आएको छ । शनिबार साँझदेखि मेलम्ची खोलामा सुरु भएको बाढी आउने क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ । खोलाले आसपासका स्थानमा ब्यापक कटान गरिरहेको छ । बाढीले पुल र सडक बगाएपछि मेलम्ची बजारसँगको सम्पर्क पनि टुटेको छ । नदीले अहिले धार नै परिवर्तन गर्न लागेको मेलम्ची […]
१७ साउन, काठमाडौं । ​चितवनको भरतपुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । असपतालमा कोभिड़का बिरामीलाई जम्मा ११० संख्या छुट्टयाइएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार शुक्रबार अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या ११२ पुगेको थियो भने अहिले अस्पतालमा १०४ सङ्क्रमित रहेका छन् । अस्पतालमा ५८ जना सामान्य तथा मध्यम लक्षण भएका बिरामी […]